သငျ လုံးဝမသိသေးတဲ့ ကမ်ဘာကွီးရဲ့ ထူးထူးဆနျးဆနျး အဖွဈအပကျြမြား - ONE DAILY MEDIA
HomeKnowledgeသငျ လုံးဝမသိသေးတဲ့ ကမ်ဘာကွီးရဲ့ ထူးထူးဆနျးဆနျး အဖွဈအပကျြမြား
သမိုငျးတလြှောကျမှာ လူသားတှကေ ကမ်ဘာကွီးပျေါက အရာအားလုံးကို မလလေ့ာနိုငျခဲ့ပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ လလေ့ာလိုကျတဲ့အခါ ရလာတဲ့ အခကျြအလကျတှကေ စိတျဝငျစားစရာ ကောငျးပွီး ဆကျလကျလလေ့ာစဖေို့ တှနျးအား ဖွဈစပေါတယျ။
1. အိုဇုနျးလှာက ပိုပွီးသေးလာတယျ။
2015 ခုနှဈနဲ့ 2000 ခုနှဈကို နှိုငျးယှဉျကွညျ့တဲ့ အခါ အန်တာတိကတိုကျပျေါက အိုဇုနျးလှာ အပေါကျက4သနျး စတုရနျးကီလိုမီတာ အထိ ကြုံ့သှားပါတယျ။ အိုဇုနျးလှာက ဆကျပွီးတော့လညျး သေးနဆေဲပါပဲ။ သိပ်ပံပညာရှငျတှေ ကတော့ အိုဇုနျးလှာကို အရငျကထကျ ပိုပွီး ထိနျးသိမျးနိုငျပွီလို့ ပွောပါတယျ။
2. အနှုတျ – 129 ဒီဂရီဖာရငျဟိုကျက ကမ်ဘာပျေါက အအေးဆုံး အပူခြိနျပါ။
ကမ်ဘာပျေါမှာ အအေးဆုံးအပူခြိနျက အနှုတျ – 129 ဒီဂရီဖာရငျဟိုကျ ဖွဈတယျလို့ သတျမှတျထားပါတယျ။ ဒီအပူခြိနျက အန်တာတိကတိုကျ Vostok စခနျးမှာ 1993 ခုနှဈ၊ ဇူလိုငျလ 23 ရကျနရေဲ့ နှရောသီ အပူခြိနျ ဖွဈပါတယျ။
3. နှဦေးရာသီက တဈနာရီကို2မိုငျနှုနျးခနျ့ သှားနပေါတယျ။
နှဦေးရာသီက တဈနာရီကို2မိုငျနှုနျးခနျ့ သှားနတေယျလို့ သိပ်ပံပညာရှငျတှကေ ပွောပါတယျ။ နှဦေးရာသီရဲ့ အမွနျနှုနျးကို နယျမွအေသီးသီးက အပငျတှရေဲ့ပနျးပှငျ့နှုနျးနဲ့ တိုငျးတာတာပါ။
4. သငျ့ရဲ့သှေးဖိအား မမွငျ့လာမယျ့ တဈခုတညျးသော နရောက Tain Shan တောငျပါ။
လူတှကေ တောငျတကျရငျ သှေးဖိအား တကျလာတတျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ တောငျတကျရငျ သှေးဖိအားမတကျတဲ့ တဈနရောတော့ ရှိပါတယျ။ အဲဒီနရောက Tian Shan တောငျပါ။ သှေးတိုးတတျသူတှအေတှကျတော့ နိဗ်ဗာနျဘုံ လိုပါပဲ။ အဲဒီကဒသေခံတှကေ ကုနျးပွငျမွငျ့မှာ နတေဲ့သူတှထေကျ သှေးဖိအား ပိုနညျးပါတယျ ။
5. Kimolos ကြှနျးက မွကွေီးထဲမှာ ပါဝငျနတေဲ့ ဆပျပွာရညျ
Kimolos ကြှနျးဆိုတာ ဂရိနိုငျငံက ကြှနျးတဈကြှနျးဖွဈပွီး 20.6 စတုရနျးမိုငျသာ ကယျြဝနျးတဲ့ Aegean ပငျလယျထဲမှာ တညျရှိပါတယျ။ မိုးရှာပွီ ဆိုရငျ ကြှနျးက ဆပျပွာမွုပျတှနေဲ့ ဖုံးလှမျးသှားပါတယျ။ Kimolos ကြှနျးရဲ့မွထေဲမှာ ရှံ့ဆပျပွာဓာတျ ရှိနပွေီး ဒသေခံတှကေ ဒီရှံ့ဆပျပွာကိုပဲ သုံးပါတယျ။
6. မွထေုလှာတှကေ ကမ်ဘာကွီးကို အကူလှနျကဲခွငျးကနေ ကာကှယျပေးပါတယျ။
ကမ်ဘာကွီးရဲ့ မွထေုလှာကွီးတှကေ7လှာရှိပွီး တဈနှဈကို 3.9 လကျမစီ အသီးသီးရှနေ့ပေါတယျ။ ကာဗှနျလညျပတျခွငျးက ကမ်ဘာကွီးကို အပူလှနျကဲခွငျးကနေ ကာကှယျပေးပါတယျ။ ကာဗှနျက ကမ်ဘာကွီးကို သကျတမျးရှညျစတေဲ့ အရေးကွီးဆုံး အရာတှထေဲက တဈခုဖွဈပါတယျ။
7. အမဇေုနျမွဈအောကျက မွအေောကျမွဈ
Hamza မွဈ ဆိုတ အမဇေုနျမွဈနဲ့အပွိုငျ အမဇေုနျမွဈရဲ့မွအေောကျ 13000 ပအေကှာကနေ စီးဆငျးနတေဲ့ မွဈဖွဈပါတယျ။
Hamza မွဈက 3700 မိုငျရှညျလြားပွီး 248 မိုငျ ကယျြဝနျးပါတယျ။ Hamza မွဈရဲ့ စီးဆငျးပုံက အလှနျနှေးပွီး ရခေဲမွဈတှေ စီးဆငျးပုံထကျ ပိုနှေးပါတယျ။ Hamza မွဈက အတ်တလန်တိတျသမုဒ်ဒရာထဲမှာ စီးဆငျးမှု ရပျသှားပါတယျ။
8. ပွနျလညျဖွဈပျေါလာမယျ့ Pengaea ကုနျးမွထေုကွီး
လှနျခဲ့တဲ့ နှဈသနျးပေါငျး 300 မီလီယံတုနျးက ကမ်ဘာကွီးတဈခုလုံးမှာ Pangaea ဆိုတဲ့ ကုနျးမွထေုကွီး တဈခုပဲ ရှိခဲ့တာပါ။ ဂြူရာဆဈကာလမှာ Pangaea ကုနျးမွထေုက ကုနျးမွထေုနှဈခုအဖွဈ ကှဲထှကျသှားပါတယျ။ နှဈပေါငျး 250 မီလီယံအတှငျး ကုနျးမွထေုတှကေ Pangaea ကုနျးမွအေသဈ အဖွဈ ပွနျလညျ ပေါငျးစညျးသှားမယျလို့ သိပ်ပံပညာရှငျတှကေ မှနျးဆပါတယျ။
9. 25 နှဈအတှငျး အန်တာတိကတိုကျမှာ ရခေဲတနျခြိနျပေါငျ3းထရီလီယံ ဆုံးရှုံးသှားခဲ့ပါတယျ။
2017 ခုနှဈအတှငျးမှာပဲ Larsen S ရခေဲပွငျကွီးက အန်တာတိကတိုကျကနေ ကှဲထှကျသှားပါတယျ။ သူ့ရဲ့အလေးခြိနျက တဈထရီလီယံ တနျခြိနျရှိပွီး ဂမြကောနိုငျငံရဲ့ တဈဝကျလောကျ ကယျြဝနျးပါတယျ။
10. ကမ်ဘာကွီးပျေါကို လှမျးမိုးလာမယျ့ အရိပျအကွီးကွီးကို 2034 ခုနှဈမှာ တဈဖနျပွနျ တှရေ့ပါဦးမယျ။
Hlmawari 8 ဆိုတဲ့ ဂပြနျ မိုးလဝေသဂွိုဟျတုက 2016 ခုနှဈမှာ ထူးခွားတဲ့ Video တဈခုကို ရိုကျယူနိုငျခဲ့ပါတယျ။ အစကတော့ ကမ်ဘာကွီးပျေါမှာ နရေောငျရှိနပွေီး နောကျတော့ ကမ်ဘာကွီးတဈခုလုံးကို အရိပျမညျးကွီးက ဖုံးလှမျးသှားပါတယျ။ ဒီ video ကို မတျလ9ရကျနေ့ နကွေတျနတေဲ့အခြိနျမှာ ကမ်ဘာနဲ့ 2000 မိုငျအကှာကနေ ရိုကျကူးခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။ ဒီလို ထူးခွားတဲ့ ဖွဈစဉျကို 2034 ခုနှဈ နှဦေးရာသီမှာ ထပျမံမွငျတှရေ့မှာ ဖွဈပါတယျ။
သင် လုံးဝမသိသေးတဲ့ ကမ္ဘာကြီးရဲ့ ထူးထူးဆန်းဆန်း အဖြစ်အပျက်များ
သမိုင်းတလျှောက်မှာ လူသားတွေက ကမ္ဘာကြီးပေါ်က အရာအားလုံးကို မလေ့လာနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် လေ့လာလိုက်တဲ့အခါ ရလာတဲ့ အချက်အလက်တွေက စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းပြီး ဆက်လက်လေ့လာစေဖို့ တွန်းအား ဖြစ်စေပါတယ်။
1. အိုဇုန်းလွှာက ပိုပြီးသေးလာတယ်။
2015 ခုနှစ်နဲ့ 2000 ခုနှစ်ကို နှိုင်းယှဉ်ကြည့်တဲ့ အခါ အန္တာတိကတိုက်ပေါ်က အိုဇုန်းလွှာ အပေါက်က4သန်း စတုရန်းကီလိုမီတာ အထိ ကျုံ့သွားပါတယ်။ အိုဇုန်းလွှာက ဆက်ပြီးတော့လည်း သေးနေဆဲပါပဲ။ သိပ္ပံပညာရှင်တွေ ကတော့ အိုဇုန်းလွှာကို အရင်ကထက် ပိုပြီး ထိန်းသိမ်းနိုင်ပြီလို့ ပြောပါတယ်။
2. အနှုတ် – 129 ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်က ကမ္ဘာပေါ်က အအေးဆုံး အပူချိန်ပါ။
ကမ္ဘာပေါ်မှာ အအေးဆုံးအပူချိန်က အနှုတ် – 129 ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက် ဖြစ်တယ်လို့ သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ ဒီအပူချိန်က အန္တာတိကတိုက် Vostok စခန်းမှာ 1993 ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ 23 ရက်နေ့ရဲ့ နွေရာသီ အပူချိန် ဖြစ်ပါတယ်။
3. နွေဦးရာသီက တစ်နာရီကို2မိုင်နှုန်းခန့် သွားနေပါတယ်။
နွေဦးရာသီက တစ်နာရီကို2မိုင်နှုန်းခန့် သွားနေတယ်လို့ သိပ္ပံပညာရှင်တွေက ပြောပါတယ်။ နွေဦးရာသီရဲ့ အမြန်နှုန်းကို နယ်မြေအသီးသီးက အပင်တွေရဲ့ပန်းပွင့်နှုန်းနဲ့ တိုင်းတာတာပါ။
4. သင့်ရဲ့သွေးဖိအား မမြင့်လာမယ့် တစ်ခုတည်းသော နေရာက Tain Shan တောင်ပါ။
လူတွေက တောင်တက်ရင် သွေးဖိအား တက်လာတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တောင်တက်ရင် သွေးဖိအားမတက်တဲ့ တစ်နေရာတော့ ရှိပါတယ်။ အဲဒီနေရာက Tian Shan တောင်ပါ။ သွေးတိုးတတ်သူတွေအတွက်တော့ နိဗ္ဗာန်ဘုံ လိုပါပဲ။ အဲဒီကဒေသခံတွေက ကုန်းပြင်မြင့်မှာ နေတဲ့သူတွေထက် သွေးဖိအား ပိုနည်းပါတယ် ။
5. Kimolos ကျွန်းက မြေကြီးထဲမှာ ပါဝင်နေတဲ့ ဆပ်ပြာရည်
Kimolos ကျွန်းဆိုတာ ဂရိနိုင်ငံက ကျွန်းတစ်ကျွန်းဖြစ်ပြီး 20.6 စတုရန်းမိုင်သာ ကျယ်ဝန်းတဲ့ Aegean ပင်လယ်ထဲမှာ တည်ရှိပါတယ်။ မိုးရွာပြီ ဆိုရင် ကျွန်းက ဆပ်ပြာမြုပ်တွေနဲ့ ဖုံးလွှမ်းသွားပါတယ်။ Kimolos ကျွန်းရဲ့မြေထဲမှာ ရွှံ့ဆပ်ပြာဓာတ်ရှိနေပြီး ဒေသခံတွေက ဒီရွှံ့ဆပ်ပြာကိုပဲ သုံးပါတယ်။
6. မြေထုလွှာတွေက ကမ္ဘာကြီးကို အကူလွန်ကဲခြင်းကနေ ကာကွယ်ပေးပါတယ်။
ကမ္ဘာကြီးရဲ့ မြေထုလွှာကြီးတွေက7လွှာရှိပြီး တစ်နှစ်ကို 3.9 လက်မစီ အသီးသီးရွေ့နေပါတယ်။ ကာဗွန်လည်ပတ်ခြင်းက ကမ္ဘာကြီးကို အပူလွန်ကဲခြင်းကနေ ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ ကာဗွန်က ကမ္ဘာကြီးကို သက်တမ်းရှည်စေတဲ့ အရေးကြီးဆုံး အရာတွေထဲက တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
7. အမေဇုန်မြစ်အောက်က မြေအောက်မြစ်
Hamza မြစ် ဆိုတ အမေဇုန်မြစ်နဲ့အပြိုင် အမေဇုန်မြစ်ရဲ့မြေအောက် 13000 ပေအကွာကနေ စီးဆင်းနေတဲ့ မြစ်ဖြစ်ပါတယ်။
Hamza မြစ်က 3700 မိုင်ရှည်လျားပြီး 248 မိုင် ကျယ်ဝန်းပါတယ်။ Hamza မြစ်ရဲ့ စီးဆင်းပုံက အလွန်နှေးပြီး ရေခဲမြစ်တွေ စီးဆင်းပုံထက် ပိုနှေးပါတယ်။ Hamza မြစ်က အတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာထဲမှာ စီးဆင်းမှု ရပ်သွားပါတယ်။
8. ပြန်လည်ဖြစ်ပေါ်လာမယ့် Pengaea ကုန်းမြေထုကြီး
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်သန်းပေါင်း 300 မီလီယံတုန်းက ကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံးမှာ Pangaea ဆိုတဲ့ ကုန်းမြေထုကြီး တစ်ခုပဲ ရှိခဲ့တာပါ။ ဂျူရာဆစ်ကာလမှာ Pangaea ကုန်းမြေထုက ကုန်းမြေထုနှစ်ခုအဖြစ် ကွဲထွက်သွားပါတယ်။ နှစ်ပေါင်း 250 မီလီယံအတွင်း ကုန်းမြေထုတွေက Pangaea ကုန်းမြေအသစ် အဖြစ် ပြန်လည် ပေါင်းစည်းသွားမယ်လို့ သိပ္ပံပညာရှင်တွေက မှန်းဆပါတယ်။
9. 25 နှစ်အတွင်း အန္တာတိကတိုက်မှာ ရေခဲတန်ချိန်ပေါင်3းထရီလီယံ ဆုံးရှုံးသွားခဲ့ပါတယ်။
2017 ခုနှစ်အတွင်းမှာပဲ Larsen S ရေခဲပြင်ကြီးက အန္တာတိကတိုက်ကနေ ကွဲထွက်သွားပါတယ်။ သူ့ရဲ့အလေးချိန်က တစ်ထရီလီယံ တန်ချိန်ရှိပြီး ဂျမေကာနိုင်ငံရဲ့ တစ်ဝက်လောက် ကျယ်ဝန်းပါတယ်။
10. ကမ္ဘာကြီးပေါ်ကို လွှမ်းမိုးလာမယ့် အရိပ်အကြီးကြီးကို 2034 ခုနှစ်မှာ တစ်ဖန်ပြန် တွေ့ရပါဦးမယ်။
Hlmawari 8 ဆိုတဲ့ ဂျပန် မိုးလေဝသဂြိုဟ်တုက 2016 ခုနှစ်မှာ ထူးခြားတဲ့ Video တစ်ခုကို ရိုက်ယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အစကတော့ ကမ္ဘာကြီးပေါ်မှာ နေရောင်ရှိနေပြီး နောက်တော့ ကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံးကို အရိပ်မည်းကြီးက ဖုံးလွှမ်းသွားပါတယ်။ ဒီ video ကို မတ်လ9ရက်နေ့ နေကြတ်နေတဲ့အချိန်မှာ ကမ္ဘာနဲ့ 2000 မိုင်အကွာကနေ ရိုက်ကူးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို ထူးခြားတဲ့ ဖြစ်စဉ်ကို 2034 ခုနှစ် နွေဦးရာသီမှာ ထပ်မံမြင်တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။